Ngabe Ukuthengisa Kwedijithali Kondla Kanjani Umsele Wakho Wokuthengisa | Martech Zone
Lapho amabhizinisi ehlaziya ifanela yawo yokuthengisa, lokho abazama ukukwenza ukuqonda kangcono isigaba ngasinye ohambweni lwabathengi babo ukubona ukuthi yimaphi amasu abangafeza izinto ezimbili:
Usayizi - Uma ukumaketha kungaheha amathemba amaningi kuzobonakala ukuthi amathuba okukhulisa ibhizinisi labo azokwenyuka uma kubhekwa ukuthi amazinga okuguqulwa ahlala engaguquki. Ngamanye amagama… uma ngidonsela amanye amathuba ayi-1,000 5 ngesikhangiso futhi nginezinga lokuguqulwa elingu-50%, lokho kuzolingana namakhasimende amaningi angama-XNUMX.
Ukuguqulwa - Esigabeni ngasinye kumngcele wokuthengisa, ukumaketha nokuthengisa kufanele kube kusebenza ukukhuphula izinga lokuguqulwa ukushayela amathemba amaningi ngokuguqulwa. Ngamanye amagama, uma ngikhanga lawo mathemba ayi-1,000 6 kodwa ngikwazi ukwandisa izinga lami lokuguqulwa libe ngu-60%, lokho manje kuzolingana namakhasimende amaningi angama-XNUMX.
Uyini Umsebenzi Wokuthengisa?
Umsele wokuthengisa ukubonakaliswa okubonakalayo kwenani lamathemba okungenzeka ukuthi uwafinyelela ngokuthengisa nokumaketha ukunakekelwa kwemikhiqizo noma insizakalo yakho.
Kokubili ukuthengisa nokumaketha kuhlala kuthinta umsele wokuthengisa, imvamisa kukhulunywa ngamathemba akhona epayipini ukuchaza ukuthi bangakwazi kanjani ukubikezela ukukhula kwemali engenayo ngokuzayo kwebhizinisi labo.
Ngokumaketha kwedijithali, ukuqondanisa phakathi kokuthengisa nokumaketha kubalulekile. Ngiyayithanda le quote kusuka kuma-podcast ami wakamuva:
Ukumaketha kukhuluma nabantu, ukuthengisa kusebenza nabantu.
Uchwepheshe wakho wokuthengisa uba nezingxoxo ezibalulekile namathemba nsuku zonke. Bayakuqonda ukukhathazeka komkhakha wabo kanye nezizathu zokuthi kungani inkampani yakho ingahle ilahlekelwe yizivumelwano kulabo abancintisana nabo. Ngokuhambisana nocwaningo oluyisisekelo nolwesibili kanye nokuhlaziywa, abathengisi bangasebenzisa lolo lwazi ukondla imizamo yabo yokumaketha yedijithali… ukuqinisekisa ukuthi ikusasa kuzo zonke izigaba ze-funnel linokuqukethwe okusekelayo okusiza abaguqukela esigabeni esilandelayo.
Izigaba Zomsebenzi Wentengiso: Ukuthengisa Kwedijithali Kubondla Kanjani
Njengoba sibheka yonke iminyakazo neziteshi esingazifaka kucebo lethu lokumaketha, kunezinhlelo ezithile esingazisebenzisa ukukhulisa nokwenza ngcono isigaba ngasinye somsele wokuthengisa.
Ukukhangisa kanye imidiya etholakele shayela ukuqwashisa ngemikhiqizo nezinsizakalo ibhizinisi lakho elinikezayo. Ukukhangisa kunika amandla ithimba lakho lokumaketha ukusebenzisa izethameli ezibukeka ngokufana namaqembu akhonjiwe ukukhangisa nokwakha ukuqwashisa. Ithimba lakho lezokuxhumana lingakhiqiza okuqukethwe okujabulisayo nokuphoqayo okwabiwe ngakho futhi okushayela ulwazi. Ithimba lakho lobudlelwano bomphakathi lifaka abagqugquzeli nezindawo zabezindaba ukufinyelela izethameli ezintsha nokwakha ukuqwashisa. Ungafisa nokuhambisa imikhiqizo nezinsizakalo zakho zemiklomelo yokuqwashisa ngamaqembu ezimboni kanye nokushicilelwa.
Ngabe abantu banentshisekelo kanjani kumikhiqizo yakho noma kumasevisi akhombisa intshisekelo? Kulezi zinsuku, bavame ukuya emicimbini, babambe iqhaza emaqenjini ezimboni, babhalisele izincwadi zezindaba eziwusizo, izindatshana zokufunda, kanye nokusesha iGoogle ngezinkinga abasifunela isixazululo. Inzalo ingakhonjiswa ngokuchofoza esikhangisweni noma ngokudluliswa okuletha ithemba kuwebhusayithi yakho.
Ukucabanga ngomkhiqizo wakho kuyindaba yokuhlola izidingo, izindleko, nedumela lenkampani yakho kanye nabancintisana nabo. Lesi yisigaba lapho ukuthengisa kuqala ukubandakanyeka khona nokumaketha imikhondo efanelekile (Ama-MQL) ziguqulwa zibe imikhondo efanelekile yokuthengisa (Ama-SQL). Lokho wukuthi, amathemba okungenzeka afana namaphrofayili wakho we-demographic kanye ne-firmagraphic manje asethathwe njengomkhombandlela futhi iqembu lakho lokuthengisa liyakufanelekela ukuthi lithenge futhi libe yikhasimende elihle. Yilapho ukuthengisa kunethalente elimangalisayo, ukuhlinzeka ngamacala okusetshenziswa, ukuhlinzeka ngezixazululo, nokushaya phansi noma yikuphi ukukhathazeka okuvela kumthengi.
Ngokubona kwami, isigaba senhloso sibaluleke kakhulu ngokubuka kwesikhathi. Uma kungumsebenzisi wokusesha efuna isixazululo, ukukhululeka kokuthwebula imininingwane yabo bese wenza abathengisi bakho ukuthi babalandele kubalulekile. Usesho abalusebenzisile lunikeze inhloso yokuthi bafuna isisombululo. Isikhathi sokuphendula sokukusiza naso sibalulekile. Yilapho ukuchofoza-ukubiza, izimpendulo zefomu, ama-bots engxoxo, nama-bots aphilayo enza umthelela omkhulu emazingeni okuguqulwa.
Ukuhlola kuyisigaba lapho abathengisi baqoqa khona ulwazi oluningi ngangokunokwenzeka ukubeka ithemba ukuthi unesisombululo esifanele. Lokhu kungafaka iziphakamiso nezitatimende zomsebenzi, izingxoxo zamanani, ukufakwa kabusha kwenkontileka, noku-ayina eminye imininingwane. Lesi sigaba sikhule ngezixazululo zokunika amandla ukuthengisa eminyakeni embalwa edlule - kufaka phakathi izimpawu zedijithali nokwabelana ngemibhalo online. Kubalulekile futhi ukuthi ibhizinisi lakho libe nedumela elihle online njengoba iqembu labo elakha ukuvumelana lizobe lingena futhi licwaninga inkampani yakho.
Inqubo yokuthenga engenamthungo ibaluleke kakhulu ekuhlolweni kwe-ecommerce kumthengi okuhle njengoba kunenkampani yebhizinisi. Ukukwazi ukukhokhisa kalula nokuqoqa imali engenayo, ukuxhumana nesipiliyoni sokugibela, ukuthumela okulindelwe ukuthunyelwa noma ukuthunyelwa, nokuhambisa lokho okuthembele kumakhasimende kufanele kube lula futhi kwaziswe kahle.
Yini Engafakwa Yifanele Yokuthengisa?
Khumbula, ukugxila komugqa wokuthengisa kuguqula ithemba libe yikhasimende. Akudluli lokho ngaphandle kwamathimba wokuthengisa wanamuhla namaqembu wokumaketha ayasabela kulwazi lwamakhasimende nezidingo zokugcina amakhasimende.
Kubalulekile futhi ukuqaphela ukuthi ifaneli yokuthengisa iyisethulo esibonakalayo semizamo yenhlangano yakho yokuthengisa neyokumaketha… ayikhombisi uhambo lwangempela lwabathengi. Isibonelo, umthengi angahle ahlehle emuva naphambili ohambweni lwabo. Isibonelo, ithemba lingase lifune isisombululo sokuhlanganisa imikhiqizo emibili ngaphakathi.
Ngaleso sikhathi, bathola umbiko womhlaziyi ngohlobo lweplatifomu abayifunayo futhi bakukhombe njengesisombululo esisebenzayo. Lokho kuqale ukukwazisa kwabo yize bebevele benenhloso.
Ungakhohlwa… abathengi bathuthela ngokwengeziwe ezinqubweni zokuzenzela insiza lapho behlola ukuthenga kwabo okulandelayo. Ngenxa yalokhu, kubalulekile ukuthi inhlangano yakho ibe nelabhulali yokuqukethwe ebanzi yokubasekela ohambweni lwabo nokubashayela esinyathelweni esilandelayo! Uma wenza umsebenzi omuhle, ithuba lokufinyelela okuningi nokuguqula okuningi lizokwenzeka.
Tags: umugqa wokuthengisa we-b2bukucabangelaukuhlolwainjongoisithakazeloukuthengaUkunika Amandla Ukuthengisaukuthengiswa kwemfucuzaizigaba zefaneli yokuthengisai-sqluyini umsele wokuthengisa